Mitandrema raha mandoa vola amin'ny fampiasana ny fampidirana Google Pay amin'ny Paypal | Avy amin'ny Linux
Paypal dia rafitra fandoavam-bola an-tserasera malaza be ary amin'ny fanekena lehibe any amin'ny firenena rehetra ankoatr'izay ny rafi-fandoavam-bola hafa toa ny Google Pay dia manao rohy mba handoavana amin'ny vola hita ao amin'ny kaonty Paypal, izay raha tsy isaina dia maka ny vola avy amin'ny debit debit na carte de crédit.
Mety hampisavoritaka ihany izany rehefa afaka mandoa vola amin'ny karatrao fotsiny ianao ary izany no izy, saingy maro ny olona tia mandoa vola toy izao mba hisorohana ny plastika tsy ho voatondrona na tsotra fotsiny satria izay tadiavin'izy ireo aloany dia manamora (matetika an-tserasera) .
fa toa niteraka olana lehibe kokoa io izany hoe maro nanomboka nitatitra ny olona fa nahita fandoavam-bola tsy nahazoana alalana miaraka amin'ny kaonty PayPal anao amin'ny sehatra maro samihafa, toa ny forum PayPal na Twitter, izay samy misy Ireo tatitra dia nitovy fa izy rehetra dia nampiasa ny fampidirana Google Pay tamin'ny PayPal.
Hatramin'ity zoma 21 febroary ity, ny fifanakalozana izay mihoatra ny arivo alina indraindray dia hita ao amin'ny tantaranao PayPal, toy ny hoe avy amin'ny kaonty Google Pay anao izy ireo.
Ny iray tamin'ireo niharam-boina tao amin'ny Twitter dia nilaza fa nahatsikaritra fividianana tsy mahazatra izy amin'ny AirPods tsiroaroa telo, mitovy amin'ny $ 500. Noho izany, tsy azo atao ny manafoana ny fividianana. Ny tombam-bidin'ny fahavoazana dia eo amin'ny an'aliny tapitrisa euro ankehitriny, araka ny tatitra ampahibemaso.
Markus Fenske, mpikaroka momba ny fiarovana ny cyber miaraka amin'ny solon'anarana "iblue" ao amin'ny Twitter, Ireo hackers dia nanararaotra lesoka tamin'ny fampidirana Google Pay tamin'ny PayPal. Tao amin'ny Twitter, nilaza ity manam-pahaizana ity fa efa nampitandrina ny orinasa ny amin'ny fisian'ny fanitsakitsahana ny volana febroary 2019, saingy tsy nataon'ity vondrona ity ho laharam-pahamehana izany.
Rehefa mifandray amin'ny kaonty Google Pay ny kaonty PayPal, PayPal dia mamorona carte de crédit virtoaly, miaraka amin'ny nomeraon'ny karanao manokana, ny daty lany daty ary ny CVV, hoy i Fenske.
«PayPal dia mamela ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Google Pay. Raha amboarinao io dia azonao atao ny mamaky ny antsipirian'ny karatra amin'ny carte de crédit virtoaly amin'ny findainao. Tsy ilaina ny fanamarinana ”, hoy ny nenina nataon'i Markus Fenske.
Amin'ireny toe-javatra ireny, ny hackers dia afaka manangona angona avy amin'ny karatra virtoaly. Noho io angon-drakitra io dia tsy sarotra amin'ny hacker ny mividy ao amin'ny magazay amin'ny kaontiny.
Ireo mpandray ny fifanakalozana matetika dia fivarotana lasibatra, izay resahina amin'ny fanambarana amin'ny endrika "Target T-". Ny fikarohana Google dia mamantatra haingana ny toerana misy ireo magazay samihafa ireo.
Nilaza ny mpanao famotorana fa mety misy fomba telo ahazoan'ny mpanafika antsipiriany amin'ny karatra virtoaly.
Voalohany, amin'ny famakiana ny antsipirian'ny karatra amin'ny telefaona finday na ny efijery iray an'ny mpampiasa. Faharoa, amin'ny alàlan'ny malware mamely ny fitaovan'ny mpampiasa. Farany maminavina izany.
"Mety hitranga fa noteren'ilay mpanafika fotsiny ny laharan'ny karatra sy ny daty lany daty, izay eo amin'ny iray taona eo ho eo," hoy i Fenske. 'Izany dia mahatonga azy io ho toerana fikarohana kely. Ary hanazavana fa "tsy maninona ny CVC", manazava fa "Ekena ny zava-drehetra."
Na dia talohan'ny nanararaotana ny fahalemena aza, ireo mpijirika dia nanao lahatsoratra momba ny fitarainana amin'ny fikirakirana ny lavaka fiarovana hitan'ny PayPal. LNy tsikera dia manolotra programa valisoa PayPal lesoka tamin'ny alàlan'ny HackerOne, fa ity dia endrika madio.
Nilaza ny mpanoratra ny lahatsoratra fa nitatitra fahalemena maro izy ireo, saingy ny valintenin'i PayPal dia nanampy betsaka. Ohatra, ny iray amin'ireo banga voalaza dia mamela anao hihoatra ny 2FA, iray hafa mamela anao hisoratra anarana finday vaovao tsy misy PIN.
Mino izany i Fenske ny Hagaks dia nahita fomba hahitana ny antsipirian'ny "karatra virtoaly" ary izy ireo dia mampiasa ny antsipirian'ny karatra ho an'ny fifanakalozana tsy nahazoana alàlana any amin'ny magazay amerikanina sy alemanina (ny ankamaroan'ny niharam-boina dia any Alemana).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Mitandrema raha mandoa vola amin'ny Google Pay ianao amin'ny alàlan'ny vola Paypal anao
Hawks dia hoy izy:
Valiny tamin'i Falken
Tiako ireo karazana lahatsoratra ireo, raha ny fanazavana azo, momba ny filaminana.